Sidee loogu qurxiyaa saldhigyadan derbiga foosha xun fikradda weyn ee farshaxankan | Abuurista khadka tooska ah
Sidee loogu qurxiyaa saldhigyadan derbiga foosha xun fikradda weyn ee farshaxankan
Waxaan sii wadaynaa fikradaha hal abuurka leh ee fanaaniinta lagu xannibay maalmahan coronavirus iskuna dayay inay ikhtiraacaan waxyaabo cusub. Waxaan hadda heysanaa fannaankan heysta gacaliso "qurxin" godadkaas foosha xun ee leh albaabada qaar inay u muuqdaan inay ka soo baxayaan filimka Ratatouille; yaraantiisa adduun iyo halyeeyada.
Cristina, ama cristinaf maadaama iyada looga yaqaan Imgur, Kaas oo qaatay saldhigyadan derbiga foosha xun sida cunsurka ugu weyn ee albaabkaas oo umuuqda in laga soo qaatay aqal-caruusad. Fikraddan xiisaha leh iyo hal-abuurka leh ayaa keentay albaabadaas qurxinta meelahaas foosha xun.
Iyo maxaa ku bilaabmay a fikrad doqon ah oo leh albaabkaas uu sameeyay mid ka mid ah saldhigyada, ka dib markii uu sawir qaaday oo uu helay dareenka bulshada, wuxuu bilaabay inuu qurxiyo inta hartay.
Mid kasta oo ka mid ah fiilooyin ayaa hadda la qurxiyey si ay si fiican u habboon oo leh midabka darbiga qolka, iyo waxa fikrad doqonnimo ah noqday, waxay noqotay wax la fiiriyo oo lagu qurxiyo walxahaas oo aan inta badan u muuqan kuwo aad ugu wanaagsan qurxinta qolka fadhiga ama qolka gurigeenna.
Haa waa run taas tan nooca albaabada waa inaad si dhow ugu fiirsataa naqshada qolka si ay u socoto isla waqti isku mid ah, maadaama albaab laga dhigto sida caadiga ay jebin karto naqshadeena. Marka fikraddaadu way u furan tahay dadka kale inay ku daydaan oo ay siiyaan nashqad u gaar ah.
Waa run in albaabada, e xitaa daaqaduhu waxay ahaayeen ilo waxyoon hal abuur badan; xitaa daaqadahaan ayaa la sawiray iyadoo isla safarkiisa uu ku marayo adduunka iyo inuu dhowr sano ka hor sameeyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Sidee loogu qurxiyaa saldhigyadan derbiga foosha xun fikradda weyn ee farshaxankan
Haddii aad haysatid kiniin ah Android ama Chromebook nasiib ayaad ku jirtaa: Krita hadda waa la heli karaa
Giraangir midab cusub oo la heli karo oo ku yaal Adobe Color loogu talagalay Maalinta Helitaanka Adduunka